काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुत्री रेनु दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट आफूहरुमाथि राजनीतिक हिंसा भएको बताएकी छन्। भरतपुर महानगरकी मेयर समेत रहेकी रेनु दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट छोराछोरीको नाममा पटक-पटक भएको व्यक्तिगत र राजनीतिक हिंसाप्रति आपत्ति जनाएकी हुन्।
उनले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेकी छन्- तपाईले जन्माएका छोराछोरी छैनन् भन्दैमा फेरि तपाईले के,आफ्नो गुट आसेपासे र साईबर सेनामा भर्ति भएकालाई भन्दा बढ्ता कसलाई के गर्नु भएको छ ? आफ्नो इच्छालाई त्यागेर जीवनभर जनताको हितमा समर्पित हुनु कमजोरी हो ? भन्दै प्रश्न गरेकी छन्।
बिहीबार प्रेस संगठन नेपालको आयोजित भेलामा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘केपीका छोराछोरी छैनन्, मेरा त छोरी छन् ज्वाइँ छन हेर्नै र्पयो। छोरीलाई मेयर बनाउनै र्पयो, मतले नपुगे मतपत्र च्यात्नै र्पयो। ज्वाइँलाई घरघडेरी किन्दिनै र्पयो। मेरा त सन्तान छन् दिन्छु भनेछन् एकजनाले। गज्जब बहादुर हो। सुसुरो होस् त्यस्तो होस्।’
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दुई खेमामा पुगेको ओली र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड सहभागी हुने पछिल्ला कार्यक्रमहरुमा एक अर्कालाई कटाक्ष गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका कटाक्ष सुन्न पनि अफ्ट्यारो लाग्छ। त्यस्तै केपी ओलीले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सन्तान र नातागोताको विम्ब प्रयोग गर्दै कटाक्ष गर्छन। कतिपय भाषाविदले त ओलीको यस्ता प्रकारको राजनीतिक हिंसात्मक भाषामा आपत्ति जनाउदै आएका छन्।
Tagsकेपी शर्मा ओली रेनु दाहाल